WJ uthotho lweentshulube-izixhobo zokunciphisa isantya - umatshini wokuhambisa umbane waseSingapore pte ltd
Ibhokisi yebhokisi (ukunciphisa)
Izixhobo kunye nokubeka
IHub kunye neBush
Iziqhoboshi kunye bamba
WJ Series Worm-izixhobo zokunciphisa isantya
Udidi: Ibhokisi yebhokisi (ukunciphisa)
1. I-Mad ye-alloyum ephezulu ye-aluminium, ubunzima bokukhanya kunye nokungagqithisi
2. imveliso enkulu torque
3. Smooth ekusebenzeni nasezantsi ngengxolo, inokusebenza ixesha elide kwiimeko ezoyikisayo.
4. Ukusebenza okuphezulu kokukhanya.
5. Inkangeleko entle, eqinile kubomi benkonzo kunye nevolumu encinci.
6. Ukulungele ukufakwa kwe-omnibearing.
Isantya sokunciphisa isantya / ibhokisi yemiyalezo
Bayamanise No .:
I-NMRV025, iNMRV030, iNMRV040, iNMRV050, iNMRV063, iNMRV075, iNMRV090, iNMRV110, iNMRV130, iNMRV150
Luhlaza (Ral5010) / Ngwevu yeSilivere (RAL9006) Okanye kwiSicelo soMthengi
Ezezindlu: Ubungakanani 25-110 Ngaba yiAluminiyam ingxubevange, Ubungakanani 110-150 Ngaba yiCast-Iron
Ivili leWorm: ZCuSn10Pb1
Isiphumo Shaft: Steel-45 #
Umatshini woMzi-mveliso: Izinto zokutya, iiceramics, iikhemikhali, ukupakisha, ukudaya, ukusebenza kweenkuni, iglasi.
I-IEC esemgangathweni esisangqa okanye kwisicelo sabaThengi
Udidi lwehlabathi lwezixhobo zokuvelisa izixhobo, ababoneleli bemigangatho esemgangathweni, kunye nemeko yenkqubo yomgangatho wobugcisa ivumela i-EPT ukuba inikeze elona nqanaba liphezulu lokuchaneka, ukuhlala ixesha elide kunye nonyamezelo. I-EPT yeeplanethi yokuCutha iyilelwe kwaye yakhelwe ukusetyenziswa kwesantya esiphezulu kwezicelo ezisezantsi zokubuyela umva. Iinkqubo zokuvelisa i-EPT zisivumela ukuba sinikeze amandla okothuka omthwalo okhethekileyo kunye neendlela ezahlukeneyo zokukhetha.
I-Annealing, i-canonization yendalo, unyango lobushushu, ipolishi, i-nickel plating, i-chrome plating, i-zinc, i-passivization etyheli, i-passivization yegolide, i-satin, umbala omnyama opeyintiweyo njl.
Ukuchaneka kwe-CNC, ukubetha ngenqindi, ukujika, ukugaya, ukubhola, ukugaya, ukudibanisa, ukuwelda kunye nokuhlanganisa
QC kunye neSatifikethi
Amagcisa azitshekisha kwimveliso, khangela okokugqibela phambi kwephakheji ngumhloli wobulunga wobungcali
I-ISO9001: 2008, ISO14001: 2001, ISO / TS 16949: 2009
Umbuzo: Ngaba uyayithengisa inkampani okanye umenzi?
A: Iqela lethu liqukethe iifektri ezi-3 kunye neenkampani ezi-2 zokuthengisa kumazwe aphesheya.
Umbuzo: Ngaba unika iisampula? ikhululekile okanye ingaphezulu?
A: Ewe, siya thembisa isampuli for intlawulo simahla kodwa musa ukuhlawula iindleko kwempahla.
Q: lide kangakanani ixesha lokuhambisa kwakho? Yintoni imiqathango yakho yentlawulo?
A: Ngokubanzi ziintsuku ezingama-40-45. Ixesha lingahluka ngokuxhomekeke kwimveliso kunye nenqanaba lokwenza ngokwezifiso. Kwiimveliso eziqhelekileyo, intlawulo yile: 30% T / T kwangaphambili, ibhalansi ngaphambi kokuthunyelwa.
Q: Yintoni na kanye MOQ okanye ixabiso imveliso yakho?
A: Njengenkampani ye-OEM, sinokubonelela kwaye silungelelanise iimveliso zethu kuluhlu olubanzi lweemfuno.Ngoko, i-MOQ kunye nexabiso zinokwahluka kakhulu ngokobungakanani, izinto ezibonakalayo kunye nokubalulwa okuqhubekayo; Umzekelo, iimveliso ezinexabiso eliphezulu okanye iimveliso ezisemgangathweni ziya kuhlala zine-MOQ esezantsi. Nceda unxibelelane nathi ngazo zonke iinkcukacha ezifanelekileyo ukufumana eyona kowuteshini ichanekileyo.
Ukunciphisa amandla kweeGear ezihlala zikhona, Ltd.
Njengomnye wabenzi bezinto zokunciphisa izixhobo, abathengisi kunye nabathumela kwelinye ilizwe kwiimveliso zoomatshini, Sinikezela ngeebhokisi zokunciphisa izixhobo kunye nezinye iimveliso.
Nceda uqhagamshelane nathi ukufumana iinkcukacha.
Ukusetyenziswa kunye nohlobo lweeGiya ngokwe-Asi okanye indawo yeShaft
Umsebenzi nokusetyenziswa kweebhokisi zeGiya
I-Cranked Hyperlink kabini
LWETYATHANGA ephindwe kabini
YINTONI UKUKHETHA US
Sithumele iimveliso zethu kubathengi kwihlabathi liphela kwaye sazenzela igama elihle ngenxa yomgangatho ophezulu wemveliso kunye nenkonzo yasemva kokuthengisa.
Sibamkela ngokufudumeleyo abathengi kokubini ekhaya nakumazwe aphesheya ukuba banxibelelane nathi bathethathethane ngamashishini, babelane ngolwazi kwaye basebenzisane nathi.
Inkampani yethu kunye neendawo ezibuyiselweyo ezibhalwe apha azixhaswanga, azivunywanga, okanye zenziwe yi-OEM.